हिटर बालेर सुत्दा दामनको रिसोर्टमा अ’कालमा मृ’त्यु भएका आठ जना पर्यटक यि नै हुन् हेर्नुहोस् ।
January 22, 2020 Daily News NepalLeaveaComment on हिटर बालेर सुत्दा दामनको रिसोर्टमा अ’कालमा मृ’त्यु भएका आठ जना पर्यटक यि नै हुन् हेर्नुहोस् ।
काठमाडौँ : भारतको केरलबाट नेपाल घुम्न आएका ८ जना पर्यटकले मंगलबार मकवानपुरमा ज्या’न गु’माए। मकवानपुरको दामनस्थित होटल एभरेष्ट पानोरमा उनीहरुले अकालमा ज्या’न गु’माएका हुन्। चिसो मौसममा होटलको कोठाका झ्याल ढोका ब’न्द गरेपछि हिटर बालेर सुतेका उनीहरुको अक्सिजन अभावमा ज्या’न गएको हो। अ’चेत अवस्थामा होटलमा फेला परेका उनीहरुलाई काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालमा ल्याएएपछि चिकित्सकहरुले सबैलाई मृ’त घो’षित गरिदिए। भारतबाट नेपाल भ्रमणमा आएका दुई परिवारका ८ सदस्यको अस्पतालमा ल्याउनुअघि नै मृ’त्यु भइसकेको थियो ।
‘बिरामी भएको भन्‍ने खबर पाउनासाथ उहाँहरुलाई ल्याएका हौँ’, ह्याम्सका इमरजेन्सी विभाग प्रमुख डा. कमल थापाले भने, ‘अस्पतलाको हेलिप्याडमा ल्याएर चे’कजाँच गर्दा ८ जनाकै मृ’त्यु भइसकेको रहेछ।’ प्रहरीका अनुसार उनीहरुले होटेलमा ग्यासबाट चल्ने हिटर बालेर सुतेका थिए। बिहान ७ बजे कोठामा गएर हेर्दा उनीहरुको मृ’त्यु भइसकेको थियो। चिसो ठाउँमा उनीहरुले हिटर आफैंले ल्याएका थिए। म’दिरा पिएपछि हिटर बालेर सुतेकाले उनीहरुको मृ’त्यु भएको आशंका प्रहरीले गरेको छ। दामन चिसो स्थानमा भएकाले भारतीय ती पर्यटक हिटर बालेर सुतेका थिए।
सोमबार बेलुका करिब ९ बजेको समयमा १५ जनाको भारतीय टोली दामनस्थित उक्त होटलमा पुगेका थियो। उनीहरुले होटलमा ४ वटा रुम लिएका थिए। ‘तर, पारिवारिक भ्रमण भएको भन्दै उनीहरु दुईवटा रुममा सुतेका रहेछन्, धेरै चिसो नभए पनि उनीहरुले हिटर बालेर सुतेको रहेछन्’, महानगरीय प्रहरी बृत्त महाराजगञ्जका डिएसपी उमेश लम्सालले भने, ‘उनी हरुको त्यही कारणले मृ’त्यु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।’ ‘झ्याल ढोका सबै ब’न्द गरेर हिटर बालेर सुतेको अनुसन्धानबाट देखिन्छ’, उनले थपे, ‘उनीहरुको अक्सिजनको कमीको कारणले मृ’त्यु भएको हुनसक्छ।’
चिसोबाट ब’च्न हिटर बालेकै कारण उनीहरुको मृ’त्यु भएको ह्याम्स अस्पतालका डाक्टर थापा बताउँछन्। ‘झ्याल ढोका ब’न्द गरेर सुत्दा अक्सिजनको कमी भयो। त्यहाँ का’र्बनअक्साइट धेरै भयो’ डाक्टर थापाले भने, ‘धेरै मान्छे एउटै कोठामा सुतेका कारण उनीहरुको ज्या’न गएको देखिन्छ।’ मृ’त्यु हुनेमा भारतको केरलाका ३८ वर्षीय रञ्जित कप, ३४ वर्षीय इन्द्र, ३७ वर्षीय प्रविण, ३२ वर्षीया सरिया, ५ वर्षीय बालक अभी, ७ वर्षीया बालिका अर्चना, ५ वर्षीया बैशनव र ९ वर्षीया बन्द्रा रहेका छन्। उनीनीहरु दुई परिवारका हुन्।
दुई परिवारका बावु आमा र तिनका एक-एक छोरी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरु बा.३ क ३७८८ नम्बरको गाडीमा दामन पुगेको बुझिएको छ। दुईजना बस्नुपर्ने कोठामा धेरैजना बसेको कारण अक्सिजन अ’भावमा उनीहरुको ज्या’न गएको आ’शंका गरिएको छ। ह्याम्समा ल्याएपछि चिकित्सकहरुले उनीहरुको श्‍वा’सप्रश्‍वास ब’न्द भएर ज्या’न गएको जनाएका छन्। ह्याम्स अस्पतालबाट आठैजनाको श’व पो’ष्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लगिएको छ। पो’ष्टमाटम रि’पोर्टपछि मात्रै उनीहरुको मृ’त्युको कारण स्प’ष्ट हुने प्रहरीले जनाएको छ।
कसैको ब्याक्तिगत भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गर्ने युवाहरु लाई ज्वाला संग्रौलाको सन्देश..एक पल्ट अवस्य पढ्नुहोस् ।
कुलमान घिसिङ कुरिनटार फिल्डमा,होटेल ब्यवसायी घिमिरेको लापरबाहीले काठमाडौंमा लोडसेडिङ हुन सक्ने…हेर्नुहोस् ।
बाढि पहिरोमा परि मर्नेको संख्या १७५ पुग्यो, आवे पुगे पीडितहरुमाझ
July 12, 2018 Daily News Nepal
पोखराबाट आयो दुखद खबर ! अस्पतालको बेडबाट जिवनको भिख माग्दै राकेश ! मन सम्हालेर हेर्नुहोला( भिडियो)
June 16, 2019 Daily News Nepal
फेरी..कोरियामा आज एक नेपालीले गरे आत्महत्या..
July 14, 2018 Daily News Nepal
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वेबसाइटमा पोर्न भिडियो अपलोड…
जापानमा काेराेना भाइरसकाे सङ्क्रमणबाट एक जनाकाे ज्यान गयो…
वुहानका नेपाली लिन वाइड बडी जहाज शनिबार पौने ३ बजे उड्ने,.
बुबा र आमा दुवैलाई गुमाएका यि नानीहरु, पढाई खर्च नभएपछि यस्ताे…एक पल्ट अवस्य पढ्नुहोस् ।सक्दो सेयर गरौ।
हाम्रो भिडियोहरु हेर्नुहोस् Youtube मा।
कोरियामा रमेश प्रसाईको क्रेज हेर्नुहोस्।
©Daily News Nepal 2020	| Theme: News Portal by Mystery Themes.